Ndị SARM ma ọ bụ ndị na-eme mgbanwe na Androgen Receptor Modulators bụ ụdị ọhụụ dị ọhụrụ nke na-ewu ewu n'etiti ndị na-arụ ọrụ ahụ. Ndị na-eme egwuregwu na-ewere ihe mgbakwunye ndị a iji kwalite arụmọrụ ha. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ha na-arụ ọrụ site na ịtinye aka na etrogen ma ọ bụ ndị na-anabata hormone nwoke gị. Otú ọ dị, ha nwere anabolic, ma ọ bụ ihe na-ewu ahụ ike n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ na-achịkwa homonụ ma ọ bụ steroid; Nsonaazụ SARM na-enye ohere maka nrụzi akwara ngwa ngwa, na-ekwe ka akwara gị iwe obere oge iji weghachite.
Ọkà mmụta sayensị Prọfesọ James T Dalton bụ onye mbụ gosipụtara SARMS na mmalite 1990s. Dalton gafere SARM andarine ka ọ na-enyocha ọgwụgwọ maka ọrịa cancer prostate. Mgbe Dalton chọpụtara nke a, mgbe ahụ ọ mepụtara SARM ọzọ - ostarine. Ndị a bụ SARM ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-eme egwuregwu, ọbụlagodi ugbu a. Mmepe nke ọgwụ ndị a maka ahịa ọrịa kansa belatara, mana ha ghọrọ ndị ama ama n'etiti ndị na-eme egwuregwu na-achọ ihe nchekwa dị egwu na steroid.
Ọtụtụ uru na-abịa site na ịnweta mgbakwunye SARM. Agbanyeghị, a maara ha nke ọma maka:
Kwalite na ịnọgide na-enwe ọganihu ahụ ike
Emeziwanye egwuregwu egwuregwu
Mgbe ị na-agbakwunye na SARM, ndị ọrụ nwere ike ịtụ anya iburu oke ibu n'ime obere oge. Oge ị nwere ike ịdị ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ dabere na ndụ gị, usoro mgbatị ahụ, nri, usoro onunu, yana nraranye ị na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na i bulie ibu ma ghọta ọrụ gị na onye na-edozi ahụ, ị ​​nwere ike ịtụ anya nsonaazụ na-ekwe nkwa site na iji mgbakwunye SARM. Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ inweta ahụ ike, ị nwere ike ịmalite na Ostarine, otu n'ime SARM ndị kacha ochie mepụtara, nke pụtara na ọ gafere ule kachasị mmepe. Dị ka ihe niile, nsonaazụ ga-adị iche. Ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ma ọ bụ kwesịrị ịtụ anya obere oge ma ọ bụ nsonaazụ ngwa ngwa, mana, ọ bụrụ na ị kwadebe onwe gị na mmega ahụ, ihe ọmụma na-edozi ahụ yana ahụike na ahụike zuru oke, ị nwere ike nweta nsonaazụ ọma site na usoro ọ bụla.
Kedu nsonaazụ ndị ị nwere ike ịnweta site na SARM?
SARM bụ ndị a ma ama na bodybuilders n'ihi ngwongwo akwara na ịdị mfe nke iji ya tụnyere steroid nke anabolic. Mgbe ị na - eji SARM eme ihe, soro ntuziaka nke ọma ma kpọtụrụ onye na - edozi ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Na-amalite site na iji obere dose ma jiri nwayọọ nwayọọ mụbaa. Ngwaahịa ndị na - emetụta nrụpụta testosterone nke ahụ gị ka mma iji maka obere oge - izu 8 ruo 12 n'otu oge. Mgbe nke ahụ gasị, ị ga-enyefe ahụ gị izu nke anọ n’izu iri na abụọ, yabụ na ọ gaghị adịkwa etu ọkwa hormone ọhụrụ ahụ siri.
Enwere ike iji mgbakwunye maka mmezi, bulking ma ọ bụ ịcha, agbanyeghị dị ka ngwa ndị ọzọ, ị ga-achọ SARM maka ebumnuche ọ bụla. Lọ ahịa SARM nwere ọtụtụ ihe mgbakwunye maka akwara uru, abụba ọnwụ na mgbanwe stacks.
Ndị SARM na-enye gị ohere ịnweta ahụ ike site na ime ka ntachi obi gị, akwara ike gị, na ogo ọkpụkpụ gị. Agbanyeghị, ha na-enyekwa ahụ ike ga - enyere gị aka ịdị mma. Mgbe ị na-ewere SARM, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ PCT maka ịlụso ọnwụ testosterone ọgụ n'ihi na ngwaahịa anyị agaghị emebi nsogbu nke testosterone gị.
Iji SARM mee ka ọnwụ na-abawanye ụba nwere ike inyere gị aka ịba abụba isi ike nke na-esiri gị ike ịkwụsị ịnwụ ma ọ bụ mmega ahụ naanị. Ahụ ike ndị ọzọ na ibu ahụ dabere na ụdị mgbakwunye ị na-eji. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ngwa na-abịa na ọrụ ndị ọzọ dị ka mbelata mbufụt, ike obi ka mma, na nwekwuo ntachi obi.
Kedu ka SARMS si dị iche na Steroid?
Imirikiti ndị mmadụ na-atụle SARM na steroid dị ka ha abụọ na-enye uru yiri ya. E jiri ya tụnyere steroid, SARM na-agbaso usoro dị iche iche. Ha nwere ike ịba uru na-enweghị inye ndị ọrụ nsogbu ndị na-emerụ ahụ nke steroid na-akpata. Otú ọ dị, SARM nwere mmetụta yiri nke ahụ na steroid; isi ihe dị iche bụ na mmetụta ndị a 'ike. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ nke SARM nwere ike ịnwe ọgbụgbọ ma ọ bụ na-egbochi hormone, ma na ọkwa dị ala karịa ma ọ bụrụ na ha na-eji steroid.
Etu esi eme ka nsonaazụ iji Sarms
SARM na-arụ ọrụ site na ịkpali ma ọ bụ gbochie ụfọdụ ndị nnabata na anụ ahụ. Nke a nwere ike, na akwụkwọ, nyere aka ịkwado mmetụta na uru dị mma karị ma na-egbochi mmetụta ọ bụla na-adịghị mma. Nnyocha na ihe akaebe na-egosi na SARM nwere ike ime ka akwara na ọkpụkpụ dịkwuo mma ma meziwanye abụba.
N'ime afọ ise gara aga, nchọta n'ịntanetị maka SARM (ma ọ bụ "ndị na - eme mgbanwe etrogen na ndị modulators", tinyere andarine na ostarine) na - arịgo nwayọ. Agbanyeghị na enweghị ụzọ iji mara mmadụ ole n'ime anyị na-azụ ha, nyocha nke "fatberg" a ma ama na London - oke mmanụ na akụrụngwa achọtara na nsị isi obodo - hụrụ SARM nọ na ọnụọgụ dị mkpa karịa MDMA na cocaine.
Share Tweet tụgide ya
← Okenye ochie Ozi ọhụrụ →
Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Ibutamoren MK-677
Kedu ụdị ụdị SARM kachasị mma na mgbakwunye maka bodybuilding?